Cabsi laga qabo in Sweden ay Soomaalida ku celiso wadamo aysan u dhalan | shumis.net
Home » qaxootiga soomalida » Cabsi laga qabo in Sweden ay Soomaalida ku celiso wadamo aysan u dhalan
Iyadoo ay si xoog leh u socoto musaafurinta dadka laga celinayo Sweden ee sharciga loo diiday, ayaa waxaa soo baxaya cabsi ku aadan in Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ay si qaldan u fasiratay dhalashada qaxootiga qaarkood, oo laga yaabo in shaqsiyaad la geeyo wadamo aysan u dhalan.
Arintaan ayaa qaasatan cabsi ku ah Soomaalida, maadaama ay sanadkii 2014 soo baxday in qaar badan oo ka mid ah dadkii loo diiday sharciga ka markii baaritaan lagu sameeyay lah-jadooda si qaldan loo baaray. Arintaasi ayaa ka dambeysay ka dib markii nin Soomaali ah oo waxbarashadiisa been ka sheegay loo xilsaaray in uu dadka xaqiijiyo halka ay ka yimaadeen isaga oo dhagaysanaya luuqadooda. Taasi ayaa keentay in ninkaasi uu dad Soomaali ah ku sheegay in ay ka yimaadeen Kenya, Tanzania, iyo xitaa Rwanda.
Laanta Socdaalka Sweden ayaa xitaa isku dayday in ay gabadh Soomaali ah ku celiyaan Tanzania, iyadoo markii wadankaasi la geeyay ay diiday dowlada wadankaasi in ay qaabilaan. Inkastoo markii dambe ay Migrationsverket heshiiskii kala noqotay shirkadii uu u shaqaynayay ninka beenaalaha ah ayaysan haddana wax ka badalin inta badan go’aamiddii uu gaaray.
Hadaba hadda oo booliska lagu amray in ay 80.000 qof wadanka ka musaafuriyaan, oo bishaan June, dad badan laga goostay lacagtii gunada isla markaana laga ceyriyay guryihii ay deganayeen, ayay soo baxaysaa cabsida ah in dadkaasi oo qaarkood hadda xabsiyada ku jira in lagu celiyo wadamo aysan u dhalan.
Wargeyska SvD oo arintaan mowduuc dheer ka diyaariyay ayaa qoray in arintaan ay sidoo kale ku dhacday dad ka soo jeeda Kurdistan oo lagu celiyay wadamada Armernia iyo meelo kale.
Title: Cabsi laga qabo in Sweden ay Soomaalida ku celiso wadamo aysan u dhalan
Posted by Unknown, Published at July 01, 2016 and have 0 comments